ငါးကျည်းပေါက်အိုးကပ်ချက် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကြက်သွန်ဖြူ ....................၇ တက်
ဆေးပြီး..ငါးငံပြာရည် ၊ နနွင်းမှုန်. ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.အနည်းငယ်တို.နဲ.(၁၀)
အတွက်ချက်တဲ့အခါ ကြေမွမှုမဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးပါတယ်)
ကြက်သွန်နီ ၊ ဖြူ ၊ ငရုတ်ခြောက်တောင့်တွေကို ညှက်နေအောင်ထောင်းပြီး
နနွင်း ၊အရောင်တင် ၊ ငံပြာရည် ၊ဟင်းခတ်မှုန်. တို.ထည့် ၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီးတွေထည့်ပြီး..ဆီကို အိုးပတ်ပတ်လည်ထည့်ပေး
ဆီပြန်ပြီး..အနှစ်ကျပြီဆို ဇွန်းကလေးနဲ.အသာအယာမွေပေးပါ။ အရသာနယ်ထားတဲ့ငါးကျည်းပေါက်လေးတွေထည့်ပြီး..နှံ.သွားအောင်မွှေပေးပါ။ လိုအပ်ပါကရေအနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ပြီး.မီးအေးအေးမှာ..အဖုံးပိတ်ချက်ပါ။
ရေခမ်းကာနီးမှာမန်ကျည်းသီးအနှစ်တွေကို နှံ.အောင်လောင်းထည့်ပြီး..ဒယ်အိုးကို လှည့်
ကာ၊ စောင်းကာ..အိုးကပ်(ဆီပြန်) လာအောင်ချက်ပေးရပါမယ်..။